Jürgen Klopp oo uga digay kooxdiisa Liverpool awooda Manchester United – Gool FM
(Liverpool) 22 Okt 2021. Tababaraha Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa kooxdiisa uga digay awooda Manchester United, kaddib guushii soo labashada ahayd ee Red Devils ay kaga gaartay Atalanta, tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay 3/2.
Liverpool ayaa booqan doonta Manchester United Axadda soo socota, ciyaar qeyb ka ah kulammada Isbuuca sagaalaad ee Horyaalka Premier League, kaasoo ka dhici doona garoonka Old Trafford.
Haddaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp, wuxuuna yiri:
“Ilbiriqsi walba gacmaheyga ayaan isku xoqoyay, mana jirin wax sabab ah.” ayuu yiri Klopp mar uu ka hadlayay kulankii Man United iyo Atalanta.
“Atalanta ayaa qeybtii hore dhibaatooyin ku abuurtay Man United, laakiin xitaa qeybtaas waxay heleen seddex fursadood oo cad.”
“Qeybtii labaad Manchester United waxay sameysay bandhig xooggan, waxay doonayeen inay ku gaaraan tayada ay haystaan, waxayna dhibaato ku abuuri karaan koox kasta, gaar ahaan haddii aad joojiso inaad ciyaarto kubbadda cagta, taasoo Atalanta wax yar sameysay.”
“Waxaan isku diyaarinayaa kulan adag oo aan la ciyaari doono koox aad u fiican, waxaan ku qaadanay waqti dheer oo nagu filan si aan u ogaano sida uu muhiim u yahay iska hor imaadkan.”